Shabakadda Amiirnuur – Page 53
Sawirro: Ganacsiga Yar Yar oo Kusoo Badanaya Wilaayaada Islaamiga Ah Ee Bay Iyo Bakool.
Wilaayaadka islaamiga ah ee Bay iyo Bakool, oo aan usbuuc ka hor booqasho ku tagnay, ayaa waxaan kusoo aragnay horumarro kala duwan oo dhinac walba ah. Dhanka arrimaha bulshada, waxaa wilaayada aad ugu soo badanaya ganacsiga yar yar, waana ay ka duwananyd sidii ay ahayd sannadkii hore. Magaalooyin iyo degaano […]
Dhageyso: Dagaalyahankii Weerarka Naf Hurnimo ku qaaday saldhigga Baar Sanguuni oo Wareysi Cajiib ah bixiyay!
Yuusuf Cumar Cali, 24-kii bishii Ramadan ee lasoo dhaafay ayuu gaari miineysan ku weeraray saldhigga maleeshiyaatka Jubbalan ee deegaanka Baar-Sanguuni ee duleedka magaalada Kismaayo, ka hor inta uusan u dhaqaaqin howlgalkiisa ayuu dabadhilifyada u diray farriimo kulul, uguna soo bandhigay baaq towbadkeen ah balse maleeshiyada intooda kama faa’ideysan baaqaas kumana […]
Daawo: Xarakada Al-Shabaab Oo Soo Bandhigtay Sawirada Weerarkii Lagu Qaaday Xerada Baar Sanguuni.
Maktabka warfaafinta ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta baahiyey sawirada weerarkii lagu qaaday xerada maleeshiyaatka Soomaalida ee Baar Sanguuni, Iyadoo sidoo kalena ay soo baxayaan faah-faahino dheeraad ah oo laga helayo weerarka. Weerarkan oo ku bilowday camaliyad Istish-haadi ah, uuna xigay weerar toos ah ayey ciidamada Al-Shabaab ugu suuragashay in […]
Dhageyso: Sheekh Abuu Muscab Oo Shir Jaraa’id Ku Faah Faahiyay Weerarkii Baar Sanguuni.
Taliska ciidamada Xarkada Shabaabul Mujaahidiin ayaa faah faahin dheeri ah ka bixiyay howlgalkii aadka u xooganaa ee saaka ka dhacay deegaan dhanka waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo. Sheekh C/Caziiz Abuu Muscab oo ah afhayeenka ciidamada Al Shabaab ayaa shir Jaraa’id oo uu qabtay ku faah faahiyay wixii ka dhacay saldhigga […]
Sawirro: Hey’adda Al-Ixsaan oo Xanuuno Ka Daaweeneysa Xoolaha Sh/hoose.
Jamciyadda kheyriga ah ee Al-Ixsaan, ayaa gobolka Sh/hoose, ka wada ol’ole ay ku daaweeneyso xoolaha gaar ahaan Geela oo xanuuno laga sheegayay usbuucyadii lasoo dhaafay. Illaa iyo hadda waxay jamciyaddu meelo kala duwan oo gobolka ah ku daweysay 188 neef oo Geel ah sida ay inoo xaqiijiyen dhaqaatiirta. Ol’olahan ayaa […]
Sheekh Abuu Muscab: “27 Askari Ayaan Ku Dilnay Weerarkii Baar Sanguuni”
Warar faah faahsan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo markale ka dhacay deegaan katirsan Jubbada Hoose. Waxyar kadib markii la tuktay salaadda subax, waxaa ciidamo aad u hubeysan oo katirsan milliteriga Xarakada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka Jubbaland ku leeyihiin deegaanka Baarka duleedka magaalada […]
Faafaahin: Ciidamo aad u badan Oo lagu dilay Weerarkii Deegaanka Baarka.
Waxyar kadib markii la tuktay salaadda subax, waxaa ciidamo aad u hubeysan oo katirsan milliteriga Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka Jubbaland ku leeyihiin deegaanka Baarka duleedka magaalada Kismaayo. Weerarka waxaa lagu daah furay camaliyad istish-haadi ah oo si weyn looga maqlay jugteeda meelo ka baxsan […]
Sawirro: Beeraha Bay Iyo Bakool oo Badar Badan Laga Goosanayo Bisha Soo Socota Insha’aah.
Wariyaal ka tirsan warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, ayaa dhawaan socdaal shaqo ku tagay degaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee Bay iyo Bakool. Marka la eego dhanka wax soo saarka, guud ahaan wilaayadu waxay ahayd mid ka duwan afartii sannadood ee lasoo dhaafay, kadib markii uu Allaah, […]
Degdeg: Xarakada Al-Shabaab oo Duqeysay Markab Sahay U Siday Ciidamada Amisom Ee Heysta Baraawe.
Wararka naga soo gaaraya degmada Baraawe, ee gobolka Sh/hoose, ayaa waxay sheegayaan in Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, ay madaafiic ku weerartay markab kusoo xirtay xeebta degmada Baraawe, kaasoo la sheegay inuu sahay u siday ciidamada Amisom, ee heystay degmadaas. Dadka degaanka ayaa waxay sheegeen iney maqlayeen madaafiic u muuqatay mid ku […]
Istish-haadka hogaanka Mujaahidiinta waa mid kamid ah astaamaha muujinaya sidqiga Manhjka, qaa’id majiro ku baxa dhabaha Jihaadka illaa Alle wuxu keenaa bedelkiisa tobanaan hogaamiye oo sii amba qaadaa wadadiiisasa. Inkastoo geerida ama istish-haadka culimadu ay tahay duleel ay adagtahay in la buuxiyo, hadana wuxuu Alle barakeeyay dacwooda, wuxuuna qubuul u […]